Dzorera Outlook Dhata kubva kuVirtual Machine Disk Mafaira, Backup Mafaira uye Disk Mifananidzo Mafaira
musha Products DataNumen Outlook Repair Dzorera Outlook Dhata kubva kuVirtual Machine Disk Mafaira, Backup Mafaira uye Disk Mifananidzo Mafaira
Kana yako Outlook PST /OST faira rakachengetwa pane inotevera faira:
VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) faira (*. Vmdk). Semuenzaniso, iwe unochengeta yako Outlook PST /OST faira pane virtual diski muVMWare.
Virtual PC VHD (Virtual Hard Dhisiki) faira (*. Vhd). Semuenzaniso, iwe unochengeta yako Outlook PST /OST faira pane virtual diski mu Virtual PC. Kana iwe unoita backup yeOptlook PST /OST faira kuburikidza neWindows Backup uye Dzosera basa.
Acronis Yechokwadi Mufananidzo faira (*. Tib)
Norton Ghost faira (*. gho, * .v2i)
Windows NTBackup faira (*.bkf)
ISO mufananidzo faira (*. Iso)
Disk mufananidzo faira (*. Img)
CD / DVD yemufananidzo faira (*. Bin)
Doro 120% Mirror Disk Faira (MDF) faira (*. Mdf)
Nero faira refaira (*. Nrg)
uye haugone kuwana iyo data muPST /OST faira kune zvimwe zvikonzero, semuenzaniso:
Unodzima yako Outlook PST /OST faira kubva padhisiki dhisiki muVMWare kana Virtual PC.
Iwe fomati iyo chaiyo diski muVMWare kana Virtual PC nekukanganisa.
Iyo chaiyo diski muVMWare kana Virtual PC haigone kukwirwa kana kuvhurwa nemazvo.
Iyo chaiyo diski muVMWare kana Virtual PC yakashata kana kukuvara.
Iyo yekuchengetedza faira pane backup midhiya yakaora kana kukuvara uye haugone kudzorera yako PST /OST faira kubva pairi.
Iyo diski yemufananidzo faira yakaora kana kukuvara uye haugone kutora yako PST /OST faira kubva pairi.
Uye zvimwe zvakawanda…
Ipapo iwe uchiri kugona kupora iyo data muPST /OST faira nekupenengura uye kudzoreredza inoenderana muchina dhisiki dhisiki faira, backup faira kana diski mufananidzo faira na DataNumen Outlook Repair. Ingosarudza iyo chaiyo muchina dhisiki faira, backup faira kana dhisiki yemufananidzo faira sosi faira kuti igadziriswe, DataNumen Outlook Repair ichaongorora faira rekunobva, kuriongorora, kudzoreredza iyo data reOptlook rakachengetwa pane iyo faira, uye nekuiburitsa kune itsva yakagadziriswa PST faira.
Kana yako Outlook PST /OST faira rinochengetwa pane rakaomarara diski kana dhiraivha, uye haugone kuwana iyo PST /OST faira kune zvimwe zvikonzero, semuenzaniso:
Unodzima yako Outlook PST /OST faira kubva ku hard disk kana dhiraivha.
Iwe fomati dhisiki rakaomarara kana dhiraivha nekukanganisa.
Yako hard disk kana dhiraivha inokundikana uye haugone kuwana mafaera zvekare.
Ipapo unogona kushandisa DataNumen Disk Image kugadzira mufananidzo weiyo hard disk kana dhiraivha, wobva wadzoreredza iyo PST /OST data kubva kumufananidzo faira ine DataNumen Outlook Repair.